Buugga is-qaddarinta iyo is-hagaajinta | Ragga Caqliga leh
Haddii aad ku jirto daqiiqad muhiim ah oo horumar ah, waa inaad waqtigaaga gelisaa akhrinta mid ka mid ah buugaagta isku-kalsoonida ah ee aan kugula talineyno si adiga shakhsi ahaan laguu ogaado. Waa buugaag laga qoray aragtida qoraa doonaya inuu gacan ka geysto toosinta dhammaan kuwa u baahan. Waa kobcin iyo koritaan shaqsiyeed.
Ma seegi kartid akhrinta is-caawinta shaqsiyeed si aan u hagaajino aragtideena oo aan u gaarno baraarug. Waa baasa nolosha oo ay ku jiraan shaqada, nolosha bulshada, qoyska iyo jacaylka, halkaas oo qoraalladani ay ku qori doonaan sida loola kulmo hubin la’aan kasta oo ka timaada miisaanka ay bixiyaan nolosha iyo ka fiirsashada shaqsiyeed.
1 Buugaag is-qiimayn ah oo is-hagaajin ah
1.1 Hadiyadaha kaamilnimada
1.2 Khariidadda guusha
1.3 Garaadka dareenka 2.0
1.5 Aagaggaaga xun
1.6 Naftaada u jeclow sida noloshaadu ugu xidhan tahay
1.7 Hadda waa marki aad faraxsanaan lahayd
1.8 Sidee looga adkaadaa naftaada xilliyada dhibaatada
Buugaag is-qiimayn ah oo is-hagaajin ah
Buug caadifad lagu raray iyo leh weedho ay ka buuxaan xaqiiqo iyo sababo badan. Dad badani ma taageeraan aragtidiisa mar haddii aan si cilmiyaysan loo xaqiijin, laakiin taas wuu na siiyaa dhiirigelin dhab ah, qiyamyo badan oo lagu dhaqmo iyo gaar ahaan aqbalaadda shaqsiyeed.
Waxaa qoray John C. Maxwell oo naga dhigaya inaan aragno sidee ayaynu u qaddarineynaa safarka nolosheenna tan iyo tuugsigii ilaa dhammaadkii. Waxay noo muujin doontaa sidaad u noqon lahayd mid guulaysta, laakiin maaha hanti iyo awood, laakiin waxaad ka heli doontaa farxaddaada iyo awood -siinta. Qaabkeeda iyo qaabkeeda si loo gudbiyo waxay ka buuxaan tafaasiil qosol leh oo leh wax badan oo suuragalnimo leh.
Garaadka dareenka 2.0
Dhammaanteen waa inaan abuuro garaadkeena caadifadeed waana in la baraa markaan ka soo kornayno dhallaanka. Waa waddada lagu garto garaadkeenna oo aan ku korinno hore u qaadida guusha shaqsiyeed. Buugani wuxuu kaa caawin doonaa inaad hagaajiso afarta nooc ee xirfadaha aasaasiga ah: sida loo maareeyo cilaaqaadka, wacyiga bulshada, is-wacyigelinta iyo is-maamulidda. Qorayaasha buugaagtan ayaa ku siin doona talada ugu fiican sida kor loogu qaado isku dheelitirka dareenka.
Buug uu qoray Oliver Burkeman xagee waxoogaa naqdin ku saabsan fikirka togan oo bulshada dhexdeeda lagu muujiyo oo la gaadhsiiyo heer aad u sarreeya. Had iyo jeer way nagu soo daadaan oo weedhaha 'dhiirrigelinta' ayaa yimaada si kor loogu qaado xaaladda shucuureed, adigoon ku lug yeelan marka loo eego weedho fudud. Wuxuu ku qanacsan yahay in sharciga soo jiidashada uusan shaqeynin, laakiin uu u abuuro murugo aad u badan kuwa doonaya inay is dhiibaan si dusha sare ah. Iscaawintaada waxaa abuuri doona ku qanacsanaanta hagaajinta shaqsiyeed, oo leh nuxur falsafadeed iyo xaqiiqooyin ay ansaxisay oo ay markhaati ka yihiin saynisku.
Waa hage loogu talagalay la dagaallamaan sababaha aan farxadda lahayn, dadkaas oo dhan oo leh dareen ah in la culaysiiyay, in wax dambe aysan ku qancin. Intaa waxaa dheer, waxaa loogu talagalay kuwa dareemaya amni -darro, ay ka buuxaan dhismayaal iyo taasina waa sababta ay u xaniban yihiin oo aanay uga midho dhalin. Laakiin si aad u akhrido buuggan waa inaad ka go'an tahay inaad mas'uul ka noqoto horumarkaaga iyo guul weyn ku gaadho, waad ku fahmi doontaa adigoon dhib ku qabin maxaa yeelay waxay ku qoran tahay akhris aad loo akhrin karo.
Naftaada u jeclow sida noloshaadu ugu xidhan tahay
Qoraaga ayaa ku turjumay buugiisa sida uu ku bartay in uu arko gudihiisa oo uu uga gudbo caqabadaha waaweyn ee nolosha. Hadalladiisa waxaa loola jeedaa inay fahmaan dhaqammo iyo bulshooyin kala duwan oo kala duwan, oo ay ku jiraan maamulayaasha sare iyo shaqaalaha sare. Wuxuu sharaxayaa sida uu u ururiyo fikrado iyo dabeecado taxane ah oo u horseeday inuu ka gudbo oo gaaro himilooyinkiisa. Kaliya waa inaad toosisaa dariiqaaga si aad uga go'an tahay inaad naftaada jeclaato taasina waxay isu beddeli doontaa waqti ka dib.
Hadda waa marki aad faraxsanaan lahayd
Buug kale oo is-caawin ah oo uu qoray Curro Cañete oo aad u qiimeeyay akhristayaashiisa. Kuwo badan waxaa laga qoray damiirkooda iyo gudaha si ay u awoodaan inay caawiyaan dadkaas oo dhan inay farxaan. Tan darteed wuxuu u sameeyay khariidad aad u qurux badan si si fudud loo maareeyo oo ku tuso sida loo maro jidkaaga adigoo ka fogaanaya isbaarooyin badan. Qoraaga, farxaddu maahan qaddar kaliya, laakiin dariiqa uu qof raaco inuu isku kalsoonaado.
Sidee looga adkaadaa naftaada xilliyada dhibaatada
Malaha kani waa buugga in badan oo inaga mid ahi u baahan yihiin, maxaa yeelay ha ahaato dhibaato dhaqaale ama caadifadeed, bogaggiisa waxay kaa caawin karaan inaad xooggaas qaadato oo ku nool in badan oo naga mid ah. Saulo Hidalgo wuxuu helay waxa ugu muhiimsan nolosha, mana aha inaad xooggaas u hesho inaad kaga gudubto waqtiyada xun, laakiin inaad hesho jaceylkaaga oo aad kor u qaaddo isku-kalsoonaanta dulqaadasho weyn.
Kuwani waa qaar ka mid ah buugaagta in waxay kaa caawin karaan xoojinta naftaada iyo si aad u badan u fahanto carqaladaha nolosha ka hor yimaada. Shaki la'aan ma wada urursan karno dhammaantood, inkasta oo haddii aad mid walba ka fiirsato, had iyo jeer waxay kuu gudbin doonaan kuwa kale. Haddii aadan garanayn waxa aad dooranayso, ha iloobin in buugaagtu dad doortaan, waa inaad doorataa midka sida fiican kuugu gariiri doona habaynta.
Wadada buuxda ee maqaalka: Ragga Stylish » nololeedka » Waqtiyada firaaqada » Buugaag is-qiimayn iyo is-hagaajin ah